Isiphakamiso sokunyusa iminyaka yentsha yokuthenga ezikafaru
Scrolla Africa - 7th Jul 2022 0
UMengameli uCyril Ramaphosa usephakamise ukuthi kuqale kubantu abaneminyaka engu-21 ukuphuza utshwala.
Umunyu kungcwatshwa abashone kweyobumnandi
UMengameli uCyril Ramaphosa ubephakathi kwabebezohlonipha intsha engu-21 elahlekelwe impilo yayo endaweni yokucima ukoma i-Enyobeni Tarven e-Scenery Park, e-East London ekuseni ngeSonto ngomhlaka-27 kuNhlangulana.
Kusazoqhubeka ukucishwa kukagesi
Isiteleka sabasebenzi bakwa-Eskom sesiphelile kodwa ukucishwa kukagesi kuzoqhubeka kuze kuphele leli sonto nesonto elizayo.
Usinde ngokulambisa ehlaselwa uMengameli
Uhide lwezimoto ezigada uMengameli wase-Nigeria uMuhammadu Buhari luhlaselwe amadoda abehlome ngezibhamu endaweni yangakubo e-Katsina ngempelasonto.
Isimanga inyoka icishela abantu ugesi
Kuphele ihora imizi engaphezu kuka-10 000 inganawo ugesi ngesikhathi inyoka eyodwa icekela phansi izintambo zikagesi edolobheni lase-Japan i-Fukushima.
Ushwele kowabulala owayemhlukumeza
Owesifazane waseMelika owagwetshwa udilikajele eneminyaka engu-17 ngokubulala owayemhlukumeza uthole ushwele kuMbusi wase-California.
Bazoqeqesha amasosha azobavikela ekuhlaselweni yi-Russia
Izwe lase-Eastern Europe i-Latvia selimemezele ukuthi lizoqeqesha abesilisa ebusosheni njengoba likhula uvalo lokuhlaselwa yi-Russia.
Ucela ukuxegwa owevidiyo yocansi
Ividiyo ekhombisa umlingisi uSK Khoza ekhotha isinene sowesifazane ongaziwa isabalale okomlilo wequbula ngoLwesithathu ekuseni.
Owe-Safa nohlelo lokusetshenziswa kwe-VAR
UMengameli we-Safa, uDanny Jordaan, ubona sekuyisikhathi sokuthi i-PSL ifinyelele esigabeni samaligi aphezulu emhlabeni futhi yethule umsizi kanompempe (i-VAR) emidlalweni yasekhaya.
Umpetha wakuleli nesicoco somhlaba
UBongani "Wonderboy" Mahlangu uqophe umlando ngesikhathi ewina isicoco se-IBF All Africa nese-South African junior featherweight eneminyaka engu-42.
UHasifah Nassuna ube yilungu lesibili emndenini wakhe ukuqhudelana kwi-Women's Africa Cup of Nations (Wafcon).